Focus Beauty | Single Product
25ml Mask 15000.0 Ks
Detail Reviews Posts
New Skiin Whitening Selfie Face Mask က သင့်မျက်နှာအသားအရေကို ပြုပြင်ပေးမဲ့ အချက်(၃)ချက်
( ၁ ) အသားအရေ ဖြူဝင်းစေခြင်း ( ၂ ) အရေပြားအစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးခြင်း ( ၃ ) နူးညံ့သောအထိအတွေ့နှင့် တင်းရင်းလှပလာခြင်း
( ၁ ) အသားအရေ ဖြူဝင်းစေခြင်း
Niacinamide နှင့် Pearl Extract တို့က သင့်အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပစေမှာပါ။ Pearl Extract က အရေပြားကို ဝင်းပစေပါတယ်။ သဘာဝပုလဲမှ ထုတ်နှုတ်ထားသော အဆီအနှစ်များ ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် သဘာဝကျကျ ဝင်းပတဲ့ အသားအရေကို ရရှိစေပါတယ်. Glow Skin လေး ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် Glutathione နှင့် Niacinamide ။ သဘာဝအသားအရောင်ကို တစ်ဆင့် ပိုမိုဖြူဝင်းလာစေပြီး ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ Glow Skiin ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေပါတယ်။ ပုလဲအဆီအနှစ်က အသားအရေဝင်းပ တောက်ပြောင်မှုကို ရရှိစေပါတယ်။ သဘာဝပုလဲမှာ သတ္ထုဓါတ် အမျိုး ၂၀ ကျော်ပါဝင်ပြီး အခြားအာဟာရဓါတ်များစွာလည်း ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေထိန်းသိမ်းရေးပစ္စည်းတွေမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုလာတာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုလဲမှာပါဝင်တဲ့ Conchiolin ကအရေပြားကို ဝင်းပစေပါတယ်။ ဒါဟာ ပုလဲမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ အသားဓါတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Natural Moisturizing Factor (NMF) လိုပဲ အသားအရေကို ပြည့်ဝတဲ့ အစိုဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။
( ၂ ) အရေပြားအစိုဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးခြင်း
New Skiin Whitening Selfie Face Mask မှာ Hyaluronic Acid ၆ မျိုးပါဝင်သောကြောင့် အရေပြားကို ရေဓါတ်ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးခြင်း + ပြင်ပညစ်ညမ်းမှုများမှကာကွယ်ခြင်း + အာဟာရဖြည့်တင်းခြင်း Sodium Hyaluronate Sodium Hyaluronate Cross polymer Hyaluronic Acid Hydrolyzed Hyaluronic Acid Hydrolyzed sodium Hyaluronate Sodium Acetylated Hyaluronate စတဲ့ Hyaluronic Acid ၆မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပိုမိုပြည့်ဝသော ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းမှုကိုပေးစွမ်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆီနှင့် ရေဓါတိပမာဏကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးလို့အသားအရေတင်းရင်းမှုကို ရရှိစေပါတယ်။ အသားအရေကိုချောမွေ့ညီညာစေပါတယ်။
( ၃ ) နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့နဲ့ တင်းရင်းလှပလာခြင်း
Tencel Sheet က နူးညံ့ပြီး တင်းရင်းစေတဲ့ အစွမ်းပါဝင်ပါတယ်. New Skiin Whitening Selfie Face Mask ကို ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Tencel Sheet က ပုံမှန် Mask Sheet များနှင့်မတူပါဘူး။ ပုံမှန် ချည်သားတွေထက် Serum ကို စုပ်ယူမှုအားကောင်းပြီး မျက်နှာနှင့်လည်း အကောင်းဆုံး ဆွဲကပ်မှုကို ရရှိစေပါတယ်။ Eucalyptus သစ်ပင်မှ ရယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး မျက်နှာကို တင်းရင်းစွာ ဆွဲကပ်ပေးနိုင်သောကြောင့် Mask ကပ်ပြီးတိုင်း တင်းရင်းလှပတဲ့ အသားအရေကို ရရှိစေပါတယ်။ ကျန်းမာပြီး ရေဓါတ်ပြည့်ဝတဲ့ အသားအရေရရှိဖို့ဆိုရင် လုံလောက်တဲ့အနားယူမှုနဲ့ ရေတစ်လီတာခွဲခန့် သောက်ပေးရပါမယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ မသေချာဘူးဆိုရင်တော့ New Skiin Whitening Selfie Face Mask လေးကပ်ပြီး ပြည့်ဝတဲ့ ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါပြီ။
(၁) ရာသီဥတုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် အသားအရေခြောက်သွေ့သူများ (၂) တင်းတိပ်၊ အမည်းစက်နှင့် အသားအရောင်မညီညာသူများ (၃) ဖိစီးမှုများကြောင့် အရေပြားပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ထိုင်းမှိုင်းနေသူများ (၄) Glow and Glass Skin လိုချင်သူများ (၅) အသားဖြူဝင်းပြီး အစိုဓါတ်ထိန်းလိုသူများ
Mask အတွင်းထည့်သွင်းသော Serum Formulatiion မှာ အမှုန့်ပါဝင်မှုကြောင့် Mask ကပ်ပြီးချိန် မျက်နှာပေါ်မှာ အဖြူရောင်များကျန်နေတတ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို လက်နှင့်ပွတ်ပြီး အရေပြားအတွင်း စိမ့်ဝင်သွားအောင် နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါမှ Serum အတွင်းမှ အာဟာရဓါတ်မှားအားလုံး အသားအရေအတွင်း စိမ့်ဝင်သွားပြီး တစ်ညလုံးအာဟာရဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
No content available!
သဘာဝကျကျ မျက်နှာလေး ကြည်လင်ပြီး ဖြူဝင်းတောက်ပချင်တယ်ဆိုရင် ? New Skiin Mask ? ကို နေ့တိုင်း သုံးပေးနော် New Skiin Whitening Selfie Face Mask မှာပါဝင်တဲ့ Pearl Extract က အရေပြားကို ဝင်းပစေပါတယ်။ သဘာဝပုလဲမှ ထုတ်နုတ်ထားတဲ့ အဆီအနှစ်များ ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် သဘာဝကျကျ ဝင်းပတဲ့ အသားအရေကို ရရှိစေပါတယ်။ New Skiin Mask ကပ်ပြီးရင်တော့ မျက်နှာပြန်သစ်စရာမလိုပါဘူးနော် ကျန်ရှိနေတဲ့ Serum လေးတွေကို လက်နှင့် ပွတ်ပြီး မျက်နှာ အရေပြားအတွင်း စိမ့်ဝင်သွားအောင် လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါမှ Serum အတွင်းမှ အာဟာရ ဓါတ်များအားလုံး အသားအရေအတွင်း စိမ့်ဝင်သွားပြီး အာဟာရဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ?New Skiin Mask? ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်
Ma Khin Myo Latt
New skiin mask လေးကပ်ကြည့်နော် အသာအရေတကယ်ကောင်းလားမယ် အနံလေးကလည်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့လူကိုလန်းစမ်းသွားတယ်ထူးခြားတာကတခြားmaskတွေလိုကပ်ပြီးတာနဲ့မျက်နှာမသစိရဘူးနော်ဒီတိုင်းလေးထားပြီးအိပ်ယုံဘဲ ၁ဗူး ၁၅၀၀၀ ကျပ် ၅ချပ်ပါသည် ၁ချပ်ကို ၃၀၀၀ ကျပ်
Ma Tin Zar Yu
Mask New Skin ဆိုတဲ့အတိုင္း ကပ္ပီးပီးခ်င္းကို တကယ္ New Skinပါပဲ?? Mask ‌ေတြဘယ္ေလာက္ကပ္ကပ္ အသားအေရကို စိတ္တိုင္းမက်ေသးဘူးလား. ဒါဆို တကယ္ ‌ေကာင္းမြန္တဲ့ Mask ကို မသုံးရေသးလို့ပါ. ?New Skiin Whitening Selfie Face Mask? က ‌ေအာက္ပါ အခ်က္ ၃ ခ်က္နဲ႔ သင့္အသားအေရကို ျပဳျပင္ေပးပါတယ္. ၁. အသားအေရ ျဖဴ၀င္းေစျခင္း ၂. အေရျပားအစိုဓါတ္ ျဖည့္တင္းေပးျခင္း ၃. ႏူးညံ့ေသာ အထိအေတြ႕ႏွင့္ တင္းရင္းလွပလာေစျခင္း ( သင့္မ်က္ႏွာအသားအေရကို ဆြဲတင္း‌ေပးနိုင္ေသာ Tencel Sheet ကို အသုံးျပဳထားျခင္း) မထိေရာက္တဲ့ Sheet Mask ‌ေတြအစား တိတိက်က် ထိထိေရာက္‌ေရာက္‌ေလး‌ေတြကပ္ရေအာင္ . . . Price ~ 3000 ks 5ခု ပါ 1ဖာ~ 15000 ks #NewSkiinMask #TheBestMaskEver #09790237282???
New skiin mask. နဲ႔ ေပါင္းတင္ထားတဲ့ မတ္မတ္ အသားေရ ဘယ္ေလာက္လွလဲေျပာ? How to use? သိပ္ကို လြယ္ကူပါတယ္ေနာ္ ညဘက္ မ်က္ႏွာေလးသစ္ၿပီး mask ေလးကို ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ကပ္ေပး႐ုံပဲ ?၁၅ မိနစ္ဆို လုံေလာက္ၿပီေနာ္? ?mask ခြာၿပီး မ်က္ႏွာမွာရွိေနတဲ့ အႏွစ္ေလးေတြကို လက္ျဖင့္ အႏွံ့ လိမ္းေပး႐ုံပဲ အသားအေရ လုံးဝ ၾကည္လင္သြားေစရမယ္? တစ္ခ်ပ္ ၃၀၀၀ တစ္ဘူး ၅.ခ်ပ္ ပါ ၁၅၀၀၀ 09790237282??? crd
New Skiin Mask နဲ့ အခြား သာမာန် Mask ‌တွေ ဘာကွာတာလဲ . . . ၁. New Skiin Mask ကို Tencel Sheet နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာပါ. သာမာန် အပေါစား ချည်သား Mask ပါးပါး‌လေးနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး. Tencel Sheet က Mask ကပ်ထားချိန်မှာ သင့်မျက်နှာအသားအရေကို တင်းရင်းလာ‌အောင် တစ်ခါတည်း ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်. ၂. New Skiin Mask မှာ တန်ဖိုးမြင့် Ingredient များစွာ ထည့်သွင်း‌ပေးထားပါတယ်. အသားအရေ အာဟာရနှင့် ဖြူစင်၀င်းပမှုအတွက် သဘာ၀ပုလဲ ရဲ့ အဆီအနှစ်၊ ပြည့်၀တဲ့ ‌ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းမှုအတွက် Hyaluronic Acid ၆ မျိုး၊ အသားအရေ နုပျိုလှပဖို့အတွက် Vitamin B3 စတဲ့ တန်းဖိုးမြင့် Ingredient ‌တွေ ထည့်ပေးထားပါတယ်. ၃. New Skiin Mask က Korea နဲ့ မြန်မာ FDA ၂ မျိုးလုံး ရရှိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်. ၄. New Skiin Mask ကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ Skin Allergy Test များစွာ ပြုလုပ်ထားလို့ Sensitive Skin သမားများ၊ ၀က်ခြံသမားများအားလုံးလည်း စိတ်ချစွာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်. ဒါ‌ကြောင့်လည်း ‌စျေးကွက်မှာ ‌ရောင်းမလောက်‌အောင် ဖြစ်နေရတာ‌ပေါ့. New Skiin Mask ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်. #NewSkiinMask #TheBestFaceMask
လူတိုင်းအားကျရတဲ့ အသားအရေလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့က ?New Skiin Mask? ‌လေး ပုံမှန်ကပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်. ?New Skiin Whitening Selfie Face Mask? က ‌အောက်ပါ အချက် ၃ ချက်နဲ့ သင့်အသားအရေကို ပြုပြင်ပေးပါတယ်. ၁. အသားအရေ ဖြူ၀င်းစေခြင်း (Glutathione + Niacinamide + Pearl Extract ပါ၀င်ခြင်း) ၂. အရေပြားအစိုဓါတ် ဖြည့်တင်းပေးခြင်း ( Molecular Weight မတူညီသော Hyaluronic Acid ၆ မျိုး ပါ၀င်ခြင်း) ၃. နူးညံ့သော အထိအတွေ့နှင့် တင်းရင်းလှပလာစေခြင်း ( သင့်မျက်နှာအသားအရေကို ဆွဲတင်း‌ပေးနိုင်သော Tencel Sheet ကို အသုံးပြုထားခြင်း) ?New Skiin Mask? ၅ ချပ်ပါတစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်. #NewSkiinMask #TheBestFaceMask